ဝေါမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်ခြင်းနှင့် လုပ်အားဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၇. ၆. ၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေါမြို့နယ် ဖိုးဦးစိန်ကျေးရွာဆရာတော်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် တည်ဆောက်လျှက်ရှိသော ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဝေါမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌဦးမောင်ယုနှင့် အတွင်းရေးမှူးဦးသက်တိုးဝင်း ဦးဆောင်သော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် အင်အား ၇၀ ကျော်မှ အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် လုပ်အားဒါနကုသိုလ်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
← သီ​ပေါ​တွင်​ ဗမာတိုင်းရင်းသား​ရေးရာဝန်​ကြီး ပြည်​ခိုင်​ဖြိုးပါတီဝင်​များနှင့် တွေ့ဆုံ
ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံး၌ အောင်လံသစ်လွှင့်ထူ →
ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကြီးမှူးကျင်းပသောလူငယ်ညီလာခံအကြိုလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
April 30, 2018 USDP 2016 Comments Off on ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ကြီးမှူးကျင်းပသောလူငယ်ညီလာခံအကြိုလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပုလဲမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင် ပါတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ
January 28, 2019 USDP 2016 Comments Off on ပုလဲမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဆိုင်းဘုတ်တင် ပါတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ